Libya: Fanantenana lehibe ny Fahafahana zoma · Global Voices teny Malagasy
Libya: Fanantenana lehibe ny Fahafahana zoma
Voadika ny 06 Marsa 2011 4:33 GMT
Efa ho Zoma eto Libya, mihamiakatra ny fihetseham-po fa maro ny mikasa hanatontosa vavaka zoma ao an-drenivohitra Tripoli. Andro izay nomena anarana ho “Zoma-n'ny Fanafahana”, manantena fa ity no hanamarika ny fitondran'ilay mpanao didy jadona Muammar Al Gaddafi. Samy namarana ny fitondrany ny andron'ny Zoma avokoa manko, taorian'ny fihetseham-bahoaka ny filoha Toniziana Zein El Abideen Ben Ali sy ny filoha Ejipsiana Hosni Mubarak.
Ao amin'ity lahatsary navoakan'i loveroflybia ity misy vehivavy iray milaza ny tenany ho Libyana ary miantso ny lehilahy rehetra, na tanora na ny antitra, hitsangana ary handray anjara amin'ny fihetsiketseham-panoherana, ary ho faty maritiora ho fanafahana ny fireneny.
LibyaFeb17 moa manana ny dika manontolo ho amin'ny teny anglisy. Niteny izy hoe:
Tsy maintsy mandao ity firenekoity io olon liandra mpanao kolikoly io. Ento mivoaka miaraka amin'i Zghareet (fihetsiky ny molotra) ireo, Ilazao izy ireo fa anio ny andro, anio ny andronareo ry voromahery Libyana. Anio ny andronareo ry vahoaka afaka! Anio ny androanareo ry maritiora! Valio faty ny maritioranareo, ary ilazao io olona misy fahavoazana io hoe: MIALA! Ilazao io liandrà io hoe: AOKA IZAY! 42 taona, mitomany ny zanany ny reny tsirairay avy, ary mitomany ny zanany kamboty ny anabavy tsirairay avy. Ilazao izy ireo mba hivoaka, ny andro Zoma no andro fivorianareo, androm-pahafahana, hanoratra tarigetra eto Libya isika: Oh ry fireneko afaka, oh ry fireneko izay nosasana tamin'ny ran'ny Libyana. Endrey ny hamanitry ny fofona mivoaka amin'ny fireneko.
Indreto ny tora-po sasany ho amin'ity Hetsika Zoma ity ao amin'ny Twitter: